कोरोना महामारीले निम्त्याएको संकट व्यवस्थापन गर्न सरकार असफल : संकट विज्ञ डा. राम थपलिया - Dainik Online Dainik Online
संकट व्यवस्थापन विज्ञ डाक्टर राम थपलियाले कोरोना महामारीले निम्त्याएको संकट व्यवस्थापन गर्न सरकार असफल भएको बताउनुभएको छ। कोरोना महामारी रोक्न बहुमपक्षीय र बहुसरोकारवाला व्यवस्थापन रणनीति अपनाउन नसक्दजा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको बताउनुभएको हो।
शुक्रबार न्युज एजेन्सी नेपालसंग कुरा गर्दै डा. थपलियाले संकट व्यवस्थापनको लागि राजनैतिक नेतृत्वमा एकदलको र एक व्यक्ति हावी हुँदा संकट गहिरिदै गएको बताउनुभयो । यो संकट समाधान प्रभावकारी ढंगले हुन नसक्दा जनमानस र आर्थिक क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्न थालेको बताउनुभयो।
संकट व्यवस्थापनको लागि आवश्यक शासकीय संरचनामा परिवर्तन गर्न नसके नेपालले कोरोना महामारीबाट छुटकारा पाउन अझै केही बर्ष लाग्ने बताउनुभयो । संकटको यो अवस्थाले राजनैतिक अस्थिरता र अराजकता निम्त्याउन सक्ने खतरा रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। प्रस्तुत छ न्युज एजेन्सी नेपालले संकट व्यव्स्थापन विज्ञ डाक्टर थपलियासंग गरिएको संवादको संपादित अंश ।
संकट व्यवस्थापनको परिभाषा भित्र यो संकट(कोभिड१९ महामारी) कस्तो हो?
यो संकटको सबै भन्दा महत्वपुर्ण पक्ष भनेको जोखिमको संञ्चार रणनीति राज्यपक्षले ल्याउनुपर्ने थियो। जुन जोखिमको संञ्चारले हामीहरुलाई मात्रै नभएर हाम्रो र कुटनीतिक दृष्टिकोणले अन्य मुलुकहरुसंग पनि एउटै पानामा आएर मुलुकका सबै पक्षसंग , सबै पक्षलाई समेटेर जसरी समाधान गर्नुपर्ने संकट हो, त्यो नभईकन केबल सुरुसुरुमै हामीले यो संकट पनि सामान्य स्वास्थ्य संकट हो यसमा समाधान मसले पनि काम गर्छ भनेर सुरक्षा निकायहरुको बढी भर पर्ने र सुरक्षा निकायहरुको दुरुपयोग गर्ने काम पनि भए । त्यसैले यो संकट चाहीँ नितान्त राजनीतिक दृष्टिकोणले मात्रै नभईकन सबै दृष्टिकोणले समेटर बहुआयामिक क्षेत्रलाई पनि अंगालेर समाधान गर्नुपर्ने थियो । त्यो हुन सकेन । त्यो चाहीँ समाधान गर्ने प्रक्रियाहरु फरक छ ।
संकट व्यवस्थापनकमा हाम्रो शासकिय संरचनाको भूमिका रहन्छ ? कसरी?
यस्ता संकटहरु समयमै व्यवस्थापन नहुँदा नकारात्मक असर छोड्छन्। यस्तै संकटबा गृहयुद्ध हुने, अराजकता फैलिने जस्ता कुराहरु पनि हुनसक्छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ हामीले यसैगरी व्यवस्थापनमा चुक्दै गयौ भने के हुनसक्छ?